China Outdoor water-proof acrylic mgbasa ozi akara ndị na-emepụta na suppliers |Zhengcheng
A na-emechi igbe ọkụ ahụ kpamkpam, 100% enweghị mmiri, dịpụrụ adịpụ na uzuoku mmiri, enwere ike iji ya mee ihe n'oge mmiri ozuzo na-enweghị emetụta tube LED wuru.Ihe acrylic, dị mfe ihicha.Nhazi modular, dị mfe ịwụnye.
1. Ihe mgbochi mmiri na uzuzu
Igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng na-anakwere imewe igbe ahụ nke emechiri emechi nke ọma iji hụ na oghere dị n'ime igbe ọkụ adịghị ekpuchi elu ma kewapụrụ kpamkpam na vepo mmiri, uzuzu na anwụnta.N'ihe gbasara isi iyi ọkụ, anyị na-agbaso usoro mmeghe n'akụkụ, na mkpuchi oghere na-emechi ya na mkpuchi roba pụrụ iche, nke na-adaba adaba maka nkwụnye ọkụ tube ma na-eme ka ịdị ọcha nke ìhè ọkụ na kabinet dị ọcha.
2. Ọdịdị nke akara ngosi igbe ọkụ dị mma na ìhè dị ọbụna
Mpempe akwụkwọ acrylic dị elu ahọpụtara iji mee akara ngosi igbe ọkụ, elu dị larịị, na-egbuke egbuke na agba zuru oke, nnyefe ọkụ siri ike, mpụta ọkụ otu.
3. Patented tube, usoro ọkụ dị elu
Igbe ọkụ ahụ nwere tube nke etinyere n'ime ya, nke na-echekwa ike ka ọ na-ejigide ọkụ dị elu.Tụkwasị na nke ahụ, usoro ọkụ ọkụ dị elu na-eme ka ìhè ọkụ nke LED na-egosipụta ma jiri ya mee ihe.
4. Achịkọbara nke ọma ma buru ya n'enweghị nsogbu
Iji belata mmebi ndị a na-eme mgbe a na-ebu ngwaahịa ahụ, anyị ga-akwakọba ngwaahịa ahụ nke ọma, tinye ya na nnukwu katọn, wee jiri osisi dị n'èzí katọn mee ka ọ dị ike.
Nke gara aga: Ihe nrịbama ụlọ ahịa dị mma maka Yonghui
Osote: N'èzí Illuminated Led n'ihu ụlọ ahịa ọkụ Signbord
Ihe nrịbama mpụta acrylic LED maka wowo convenie...
Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Igbe nrịbama nke mpụga, Akara ngosi, Ihe nrịbama ụlọ ahịa,